Fanondranana « héroine » : Naiditra am-ponja ilay Maorisianina -
AccueilSongandinaFanondranana « héroine » : Naiditra am-ponja ilay Maorisianina
Fikasana hanondrana vovon-drongony mahery vaika milanja 500 girama any Nosy Maorisy. Maorisiana iray sy ireo Malagasy mpiray petsapetsa no voasambotra ny 02 oktobra lasa teo. Andro maromaro teo no nanaovana ny fanadihadiana ity farany sy ireo mpiray petsapetsa aminy ka nanondroany ny namany. Araka izany, nidinan ‘ny zandary avy etsy Betongolo tany Toamasina indray ny olona iray voarohirohy ho mpiray afera amin’izy roa tratra ireto, ny faran’ny herinandro lasa teo.
Afak’omaly izy ireo no naseho teo anoloan’ny mpampanoa lalana nalaina am-bavany tamin’ity raharaha ity ka izao namoahana fanapahan-kevitra fampidirina am-ponja izao. Tapitra ihany koa ny fandraisan’ny zandary an-tanana ity raharaha mahasika ny fanondranana “heroine”, izay nanenjehana ity teratany vahiny iray ity. Mbola tsy nahitana mangirana ny fomba ahatrarana izay namatsy azy ireo ity zava-mahadomelina ity, saingy mitohy kosa ny fanadihadiana. Raha ny famotorana natao azy, nolazainy fa mividy io vovon-drongony mahery vaika io izy ary halefa makatsy amin’ny nosy Maorisy indray. Fantatra fa nandritry ny fisavana ny trano nitoerany dia efa tsy nisy singa ary fonosana rongony intsony tao aminy.
Eny Antanimora izao ralehilahy miaraka amin’ireo roavavy gasy mpiara-miasa aminy, noho ny fanondranana izany zava-mahadomelina izany. Tsiahivina ny zava-niseho fa fikasana hanondrana zava-mahadomelina any amin’ny nosy Maorisy no nahatrarana ity atidoha maorisianina ity. Raha ny nambarany hatrany efa aman-taonany no nanaovany io asa ratsy io. Tamin’ity indray mitoraka ity kosa tovovavy mpiasany no nampitondrainy izany ka saron’ny zandary teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, ny 22 septambra lasa teo. Rehefa nohadihadiana ravehivavy dia nilaza fa ilay Maorisianina no tompony ary naterena izy hitondra ny zava-mahadomelina ary nafenina tany anaty fimailo. Ankoatra ity fitanana zava-mahadomelina mahery vaika sarona teny amin’ilay tovovavy iraka iray ity, fantatra fa vesatra hiampangana azy ihany koa ny fikasihan-tanana ity vehivavy voalaza fa mpiasany.
Tsy tena mbola vita tanteraka ny Lalan’ny Frankôfônia eny Ivandry sy Ankasina. Nosokafana nandraisana sy nampiasaina tamin’iny Fihaonamben’ny Frankôfônia fotsiny ihany izy ireo. Noho izany, ho fanatsarana ireo lalam-baovao roa ireo, hikatona manomboka ny volana ...Tohiny